I-Serial Killers uRay noFaye Copeland
Iqabane elidala kunazo zonke liye lathunyelwa ekufeni
URay noFaye uCkopeland banqwenela ukubulala babeneminyaka yokuthatha umhlalaphantsi. Kutheni le sibini, bobabini kwiminyaka yabo engama-70 ubudala, besuka ekuthandeni ootatomkhulu abanomdla kubabulali ababulalayo, abasebenzisa impahla yabanamaxhoba abo ukuba benze i-quilts ebusika ukuba baqhube phantsi. Nali ibali labo.
Wazalelwa e-Oklahoma ngo-1914, intsapho kaRay Copeland ayizange ichithe ixesha elide kwindawo enye. Xa wayesengumntwana, intsapho yakhe yayihlala ihamba, ekuzingeleni umsebenzi.
Le meko yaba nzima ngexesha loxinzelelo , kwaye uCopeland waphuma esikolweni waza waqala ukuxhamla imali.
Enganelisekanga ngomvuzo omncinci, wabandakanyeka ekugxekeni abantu ngaphandle kwipropati kunye nemali. Ngowe-1939 uCopeland wafunyanwa enetyala lokuba imfuyo kunye nokukhangela ukukhangela . Wagwetywa unyaka entolongweni.
UCopeland wadibana noFaye Wilson kungekudala emva kokukhululwa kwakhe entolongweni ngo-1940. Babenomtshato omncinane, batshata baza baqala ukuba nabantwana emva komnye. Eminye iminyango eyongezelelweyo yokondla, iCopeland yabuyela ngokukhawuleza ekutshontsheni kwimfuyo. Ngeli xesha le nto yayingumsebenzi wakhe okhethiweyo, wayengenakulungile. Wayehlala eboshwa kwaye wenza amanqaku ambalwa entolongweni.
Ukuqhekeza kwakhe kwakungekho nto. Wayeza kuthenga iinkomo kwiintengiso, ukubhala ukuhlola okukhohlisayo, ukuthengisa iinkomo kwaye uzame ukushiya idolophu ngaphambi kokuba abathengisi baxelelwe ukuba ukuhlolwa kukubi.
Ukuba akazange akhiphe iedolophu ngexesha, uza ku thembisa ukwenza uhlolo olufanelekileyo, kodwa ungalandeli,
Ekuhambeni kwexesha, wayevinjelwe ekuthengeni nasekuthengiseni imfuyo. Wayefuna i-scam eyayiza kumvumela ukuba asebenze nxamnye nokuvinjelwa, enye eyayingenakunceda kuyo, kwaye ukuba amapolisa awakwazi ukuyibuyisela kuye.
Kwamthatha iminyaka engama-40 ukuba acinge enye.
UCopeland waqalisa ukuqasha abahlali kunye neengqungquthela ukuba basebenze kwifama yakhe. Wazimisela ukujonga i-akhawunti, kwaye wabathumela ukuba bathenge imfuyo ngokuhlolwa kakubi kwiakhawunti zabo. ICopeland yathengisa imfuyo kwaye i-drifters iya kugxothwa kwaye ithunyelwe endleleni. Oku kwagcinwa ngamapolisa emva kwesikhashana, kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabanjwa waza wabuyela entolongweni. Xa ephumayo, wabuyela kwisiganeko esifanayo, kodwa ngeli xesha waqinisekisa ukuba uncedo oluqashiweyo alusoze lwabanjwa, okanye lwaliva kwakhona.
Ngo-Oktobha 1989, amapolisa aseMissouri afumana isicatshulwa sokuthi intloko yomntu kunye namathambo ayifumaneka kwimihlaba esemaphandleni enesibini esikhulileyo, uRay noFaye Copeland. Isigxina sokugqibela sikaRay Copeland kunye nomthetho obandakanya ukuxhamla kwemfuyo, ngokokuba amapolisa abuza uRay ngaphakathi kwipulazi yakhe malunga nehlazo, abaphathi bafuna loo ndawo. Akuzange kuthathe ixesha elide ukufumana imizimba emihlanu edibeneyo engcwatyelwe emangcwabeni angachanileyo malunga nefama.
Ingxelo ye-autopsy yamisela ukuba indoda nganye idutshulwe ngasemva kwentloko kwisithuba esondeleyo. Irejista, kunye namagama abantu basefama abade basebenze kwiCopelands, banceda amapolisa ukuba achaze imizimba. Ezilishumi elinambini zamagama, kubandakanywa abathathu amaxhoba afunyenweyo, babenecandelo elithi 'X' ebhalwe ngesandla likaFaye, elibhalwe ngaphantsi kwegama ngalinye.
Abaphathi bafumana isibhamu se-Marlin bolt-action ngaphakathi kwindlu yaseCopeland, apho iimvavanyo ze-ballistics zibonakalisa zixhobo ezifanayo njengalowo osetyenziswayo ekubulaweni. Ingqungquthela ephazamisayo kakhulu, ngaphandle kwamathambo ahlakazekile kunye nesibhamu, yayiyi-quilt eyenziwe ngesandla eyenziwe nguFaye Copeland eyenziwe kwisambatho sexhoba. ICopeland yahlawuliswa ngokukhawuleza ngokubulala abathathu , echongwa njengoPaul Jason Cowart, uJohn W Freeman, uJimmie Dale Harvey, uWayne Warner kunye noDennis Murphy.
UFaye Ufuna Ukungazi Nento Ngabambulali
UFaye Copeland uthi ungazi lutho malunga nokubulala kwaye unamathele kwimbali yakhe nangemva kokuba unikezwe isivumelwano sokutshintsha iindleko zakhe zokubulala ukuba enze ugulo lokubulala ngokuchitshulwa ngolwazi malunga namadoda asixhenxe alahlekileyo abhalwe phantsi kwirejista yakhe.
Nangona ukuhlawuliswa kwakhe kwakuya kuthetha ukuba wayechitha imali engaphantsi konyaka entolongweni, xa kuthelekiswa nokufumana isigwebo sokufa, uFaye wagxininisa ukuba akawazi nto malunga nokubulala.
U-Ray uzama u-Insanity Plea
URay wazama ukucela ukunyaniseka , kodwa ekugqibeleni wayeka waza wazama ukwenza isivumelwano nesivumelwano kunye nabatshutshisi. Abasemagunyeni abavumelanga ukuhamba kunye kunye necala lokubulala elide lihleli lihleli.
Ngethuba likaTyye Copeland, ityala lakhe lazama ukubonisa ukuba uFaye wayengenye yexhoba likaRay kwaye wahlushwa yi- Battered Women Syndrome . Kwakungathandabuzeki ukuba uFaye wayenomfazi obethekileyo, kodwa oko kwakungekho ngokwaneleyo ukuba ijaji ithethelele izenzo zakhe zokubulala ezibandayo. Ijaji yafumana uFaye Copeland enecala lokubulala kwaye wagwetywa ukubulawa ngumjovo obulalayo. Kungekudala emva koko uRay watholakala enetyala waza wagwetywa ukufa.
I-Oldest Couple Yagwetywa Ukufa
IiCopelands zenze uphawu labo kwimbali yokuba yizibini ezindala kunokuba zigwetyelwe ukufa, nangona kunjalo, azizange zenzeke. URay wabulawa ngo-1993 ngomgca wokufa . Isigwebo sikaFaye saguqulelwa ebomini entolongweni. Ngo-2002 uFaye wayenomfesane ukukhululwa entolongweni ngenxa yokunciphisa impilo kwaye wafa kwikhaya lokunakekelwa ngo-Disemba 2003, eneminyaka eyi-83.
I-Copeland Killings nguT. Miller
Imfazwe Yehlabathi II: Ukuhlasela kweItali
Ukudlala njani iDsus2 Chord
Iingqinamba ezili-11 iiMormons kufuneka zisetyenziswe ekuhloliseni abaviwa bezopolitiko
Iinqanaba ezi-5 ezide kakhulu zeentaba eYurophu